HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mizo Mooré Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
‘Ho an’ilay Mpanjakan’ny mandrakizay anie ny haja sy ny voninahitra mandrakizay.’—1 TIM. 1:17.
Nahoana no manintona antsika ny fomba fitondran’i Jehovah?
Ahoana no nampisehoan’i Jehovah fa tia ny fianakaviany eto an-tany foana izy hatramin’izay?
Inona no mandrisika anao hanompo an’ilay Mpanjakan’ny mandrakizay?
1, 2. a) Iza ilay “Mpanjakan’ny mandrakizay”, ary nahoana no mety ny iantsoana azy toy izany? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.) b) Inona no mahatonga antsika hanatona an’i Jehovah?
EFA ho 61 taona i Sobhuza II no nanjaka tao Soazilandy. Tena ela izany raha amin’ny andro ankehitriny. Misy mpitondra iray manjaka ela noho izany anefa, satria tsy fohy toy ny an’ny olombelona ny androm-piainany. Antsoin’ny Baiboly hoe “Mpanjakan’ny mandrakizay” izy. (1 Tim. 1:17) Nilaza ny anarany ny mpanao salamo iray. Hoy izy: “I Jehovah dia Mpanjaka mandritra ny fotoana tsy voafetra, eny, mandrakizay.”—Sal. 10:16.
2 Tsy toy ny fitondran’olombelona ny fitondran’Andriamanitra satria maharitra ela be. Ny fomba fitondrany anefa no mahatonga antsika hanatona azy. Nidera azy ny mpanjaka iray nitondra ny Israely nandritra ny 40 taona. Hoy izy: “Mamindra fo sy tsara fanahy i Jehovah, tsy mora tezitra sady be hatsaram-panahy feno fitiavana. Nataon’i Jehovah mafy orina any an-danitra ny seza fiandrianany, ary eo ambany fifehezan’ny fanjakany ny zava-drehetra.” (Sal. 103:8, 19) Tsy Mpanjakantsika fotsiny i Jehovah fa Ray be fitiavana koa. Ahoana no nampisehoany fa Ray tokoa izy? Ahoana no nampisehoany fa izy no Mpanjaka, taorian’ny fikomiana tao Edena ka hatramin’izao? Hiezaka hifandray kokoa aminy isika rehefa mahalala ny valin’ireo, sady hanompo azy amin’ny fo manontolo.
NAMORONA FIANAKAVIAMBE ILAY MPANJAKAN’NY MANDRAKIZAY
3. Iza no voalohany lasa anisan’ny fianakaviamben’i Jehovah, ary iza koa no noforonina ka lasa ‘zanany’?
3 Azo antoka fa tena faly i Jehovah rehefa namorona an’ilay Zanany lahitokana. Teo ambany fahefany io Zanany io, nefa tsy nanambany azy izy. Tena tiany izy io ka nasainy hanampy azy hamorona zavaboary lavorary hafa, ary niara-nifaly tamin’izany izy ireo. (Kol. 1:15-17) Anisan’ireny zavaboary ireny ny anjely maro be. Faly manompo an’Andriamanitra ny anjely, ary antsoina hoe ‘mpanompony manao ny sitrapony.’ Omen’i Jehovah voninahitra izy ireo ka antsoiny hoe ‘zanaka.’ Anisan’ny fianakaviambeny izy ireo.—Sal. 103:20-22; Joba 38:7.
4. Ahoana no nahatonga ny olombelona ho anisan’ny fianakaviamben’Andriamanitra?
4 Namorona zavaboary hafa mba ho anisan’ny fianakaviambeny i Jehovah, rehefa avy nanao ny lanitra sy ny tany. Izany dia i Adama, lehilahy voalohany. Nataon’i Jehovah araka ny endriny izy ary napetrany tao amin’ilay tany tsara tarehy nataony. (Gen. 1:26-28) I Jehovah no Mpamorona, ka rariny raha niriny hankatò azy i Adama. Toy ny Ray koa izy ka nanome toromarika, ary be fitiavana sy tsara fanahy rehefa nanao izany. Tsy naneritery be ny fiainan’ny olona ireny toromarika ireny.—Vakio ny Genesisy 2:15-17.
5. Inona no nataon’Andriamanitra mba hahatonga ny tany ho feno olona?
5 Maro ny mpanjaka olombelona tsy tia mizara andraikitra. Tsy toy izany i Jehovah. Faly izy manome andraikitra ny mpanompony, ka ataony toy ny mpianakavy itokisany izy ireo. Nomeny fahefana hanjaka amin’ny zavamananaina hafa, ohatra, i Adama. Nomeny asa sarotra nefa mahafinaritra izy, dia ny hanome anarana ny biby. (Gen. 1:26; 2:19, 20) Tsy tonga dia nofenoin’i Jehovah olona lavorary an-tapitrisany koa ny tany. Namorona vehivavy lavorary ho famenon’i Adama kosa izy, dia i Eva. (Gen. 2:21, 22) Nomeny tombontsoa hiteraka sy hameno ny tany izy mivady. Ho afaka nanitatra tsikelikely ny Paradisa ny olombelona raha nandeha tsara foana ny zava-drehetra, ka ho lasa Paradisa ny tany manontolo. Ho fianakaviana iray ny anjely sy ny olombelona, ary hiaraka hanompo an’i Jehovah mandrakizay. Ray be fitiavana tokoa i Jehovah, ka nanome an’izany fanantenana tena tsara izany!
TSY NANAIKY AN’ANDRIAMANITRA HO MPANJAKA NY ZANANY NIKOMY
6. a) Ahoana no niandohan’ny fikomiana tao amin’ny fianakavian’Andriamanitra? b) Inona no porofo fa mbola nanana fahefana i Jehovah, na dia nisy nikomy aza?
6 Nampalahelo fa tsy nanaiky an’i Jehovah ho Mpanjakany i Adama sy Eva. Naleony nanaraka an’i Satana, ilay zanak’Andriamanitra nikomy. (Gen. 3:1-6) Lasa nijaly sy maty àry izy ireo sy ny taranany. (Gen. 3:16-19; Rom. 5:12) Tsy nisy mpanompon’Andriamanitra nankatò azy intsony teto an-tany. Midika ve izany fa tsy nanana fahefana intsony Andriamanitra, ka niala tsy ho Mpanjakan’ny tany sy ny olombelona? Tsy izany mihitsy! Nampihatra ny fahefany izy, ka nandroaka an’i Adama sy Eva tany ivelan’ny zaridainan’i Edena. Nasiany kerobima niambina ny fidirana tao mba tsy hahafahan’izy ireo hiverina. (Gen. 3:23, 24) Nasehon’i Jehovah koa anefa fa Ray be fitiavana izy. Nohamafisiny fa tsy maintsy ho tanteraka ny fikasany, dia ny hanana fianakaviambe misy olombelona sy anjely tsy mivadika. Nampanantena izy fa hisy ‘taranaka’ iray handringana an’i Satana sy hanafoana ny vokatry ny fahotan’i Adama.—Vakio ny Genesisy 3:15.
7, 8. a) Nanao ahoana ny fiainana tamin’ny andron’i Noa? b) Inona no nataon’i Jehovah mba hanadiovana ny tany sy hiarovana ny fianakavian’olombelona?
7 Nisy olona nifidy ny tsy hivadika tamin’i Jehovah nandritra ny taonjato maro tatỳ aoriana. Anisan’izany i Abela sy Enoka. Tsy nanaiky an’i Jehovah ho Rainy sy Mpanjakany anefa ny ankamaroan’ny olona. “Feno herisetra ny tany” tamin’ny andron’i Noa. (Gen. 6:11) Midika ve izany fa tsy nahafehy ny zava-nitranga i Jehovah? Inona no asehon’ny tantara?
8 Diniho ny tantaran’i Noa. Nomen’i Jehovah toromarika tamin’ny an-tsipiriany izy, mba hanaovany sambofiara goavam-be hamonjena azy sy ny fianakaviany. Hita hoe tena tia ny fianakavian’olombelona koa i Jehovah, rehefa naniraka an’i Noa mba ho “mpitory ny fahamarinana.” (2 Pet. 2:5) Azo inoana fa nampirisika ny olona hibebaka i Noa sady nampitandrina hoe akaiky ny fandringanana. Toy ny rano nararaka tamin’ny lamosin-gana anefa izany. Niara-niaina tamin’ny olona nahery setra sy naloto fitondran-tena ry Noa, nandritra ny taona maro. Niaro sy nitahy an’ireo olona valo tsy nivadika ireo anefa i Jehovah, ilay Ray be fitiavana. Nandefa Safodrano eran-tany izy, ka hita fa nanana fahefana tamin’ny mpikomy sy ny anjely ratsy. Mbola nahafehy ny zava-nitranga tokoa i Jehovah.—Gen. 7:17-24.
Nasehon’i Jehovah foana hatramin’izay fa Mpanjaka izy (Fehintsoratra 6, 8, 10, 12, 17)
NY FAHEFAN’I JEHOVAH TAORIAN’NY SAFODRANO
9. Afaka nanao inona indray ny olombelona, taorian’ny Safodrano?
9 Alao sary an-tsaina ry Noa mianakavy nanitsaka ny tany indray ary nifoka rivotra madio. Azo antoka fa velom-pankasitrahana an’i Jehovah izy ireo noho izy niahy sy niaro azy. Nanorina alitara avy hatrany i Noa, ary nanao sorona mba hiderana an’i Jehovah. Nitso-drano azy mianakavy i Jehovah, ary nandidy azy ireo hoe: “Manàna taranaka, ary mihabetsaha ka mamenoa ny tany.” (Gen. 8:20–9:1) Afaka niara-nanompo an’i Jehovah indray ny olombelona nanomboka teo sady afaka nameno ny tany.
10. a) Taiza no nisy nikomy tamin’i Jehovah taorian’ny Safodrano, ary ahoana no nisehoan’izany? b) Inona no nataon’i Jehovah mba ho tanteraka ny sitrapony?
10 Tsy nikosoka ny tsy fahalavorariana anefa ny Safodrano. Mbola nitaona ny olona hanao ratsy koa i Satana sy ny anjely mpikomy. Tsy ela dia nisy nanohitra indray ny fahefan’i Jehovah. I Nimroda, zafiafin’i Noa, no nitarika an’ilay fikomiana ary mafy kokoa noho ny teo aloha izany. “Mpihaza mahery nanohitra an’i Jehovah” izy. Nanorina tanàna lehibe izy, anisan’izany i Babela, ary nanao ny tenany ho mpanjaka “tany amin’ny tany Sinara.” (Gen. 10:8-12) Nataon’io mpanjaka nikomy io izay tsy hahatanteraka ny fikasan’Andriamanitra ‘hameno ny tany.’ Inona àry no nataon’ilay Mpanjakan’ny mandrakizay? Nataony nisafotofoto ny fitenin’ny olona, ka sorena ny vahoakan’i Nimroda ary niely “nanerana ny tany.” Nentin’izy ireo nanaraka azy tany amin’ny nalehany ny fivavahan-disony sy ny fomba fitondrany vahoaka.—Gen. 11:1-9.
11. Ahoana no nampisehoan’i Jehovah fa tsy nivadika tamin’i Abrahama namany izy?
11 Nisy nanome voninahitra an’i Jehovah ihany taorian’ny Safodrano, na dia maro aza no nivavaka tamin’ny andriamani-diso. Nankatò an’i Jehovah, ohatra, i Abrahama, ka niala tao Ora tanàna niaviany, na dia niadana aza izy tao. Nipetraka tao anaty tranolay izy nandritra ny taona maro, ary nifindrafindra monina. (Gen. 11:31; Heb. 11:8, 9) Maro tamin’ny mpanjaka nanodidina azy kosa no nipetraka tao amin’ny tanàna mimanda. Toy ny rain’i Abrahama anefa i Jehovah, ka niaro azy sy ny fianakaviany. Hoy ny mpanao salamo: “Tsy nisy navelan’Andriamanitra hanambaka an’ireo. Fa nananatra mpanjaka mihitsy aza izy noho ny amin’ireo.” (Sal. 105:13, 14) Tsy nivadika tamin’i Abrahama namany i Jehovah, ka nampanantena azy hoe: “Hisy mpanjaka maro hipoitra avy aminao.”—Gen. 17:6; Jak. 2:23.
12. Ahoana no nampisehoan’i Jehovah fa nanana fahefana tamin’i Ejipta izy, ary inona no vokatr’izany teo amin’ny Israelita?
12 Naverin’Andriamanitra tamin’i Isaka zanak’i Abrahama sy Jakoba zafikeliny ilay fampanantenany hitahy azy ireo. Anisan’izany ilay hoe hisy mpanjaka amin’ny taranak’izy ireo. (Gen. 26:3-5; 35:11) Lasa andevo tany Ejipta anefa ny taranak’i Jakoba. Midika ve izany fa tsy hanatanteraka ny fampanantenany i Jehovah, na hoe niala tsy ho Mpanjakan’ny tany izy? Tsy izany mihitsy! Nampiseho ny heriny izy tamin’ny fotoana voafidiny, ka noporofoiny fa nanana fahefana tamin’i Farao mafy loha izy. Natoky an’i Jehovah ny Israelita, satria nanao zavatra miavaka izy mba hanafahana azy ireo teo amin’ny Ranomasina Mena. Niharihary tamin’izay fa mbola Mpanjakan’izao Rehetra Izao i Jehovah. Ray be fiahiana koa izy ka nampiasa ny heriny lehibe mba hiarovana ny vahoakany.—Vakio ny Eksodosy 14:13, 14.
LASA MPANJAKAN’NY ISRAELY I JEHOVAH
13, 14. a) Inona no nolazain’ny Israelita momba an’i Jehovah, tao amin’ny hira nataony? b) Inona no nampanantenain’i Jehovah an’i Davida?
13 Nihira fiderana ho an’i Jehovah ny Israelita, raha vao avy nafahana tany Ejipta. Ao amin’ny Eksodosy toko faha-15 io hira io. Hoy ny andininy faha-18: “Hanjaka i Jehovah mandritra ny fotoana tsy voafetra, eny, mandrakizay.” Lasa Mpanjakan’ilay firenena vaovao tokoa i Jehovah. (Deot. 33:5) Tsy faly anefa izy ireo nanana Mpanjaka tsy hita maso. Nangataka tamin’i Jehovah mba hanome azy mpanjaka olombelona izy ireo, 400 taona teo ho eo taorian’ny nialany tany Ejipta. Te hitovy tamin’ireo firenena nanompo sampy nanodidina azy mantsy izy ireo. (1 Sam. 8:5) Mbola Mpanjakan’izy ireo anefa i Jehovah na dia nanana mpanjaka olombelona aza izy ireo. Hita izany nandritra ny fitondran’i Davida Mpanjaka.
14 Nentin’i Davida tany Jerosalema ny Vata misy ny fifanekena. Fotoam-pifaliana tamin’izay ary nihira fiderana ny Levita. Mariho ny voalazan’ilay hira: “Aoka ireny hilaza amin’ireo firenena hoe: ‘Lasa mpanjaka i Jehovah!’” (1 Tan. 16:31) Mety hisy hanontany hoe: ‘Fa angaha i Jehovah tsy efa Mpanjakan’ny mandrakizay? Koa nahoana indray no lazaina fa lasa mpanjaka izy tamin’izay?’ Lasa Mpanjaka i Jehovah rehefa mampihatra ny fahefany, na manendry solontena mba hisolo azy amin’ny fotoana iray na mba handamina raharaha iray. Tena ilaina ny mahatakatra an’izany. Nampanantenain’i Jehovah i Davida talohan’ny hahafatesany fa haharitra mandrakizay ny fanjakany. Hoy izy: “Hotendreko ny taranaka handimby anao izay haterakao, ary hataoko mafy orina tokoa ny fanjakany.” (2 Sam. 7:12, 13) Nipoitra io ‘taranak’i’ Davida io 1,000 taona mahery tatỳ aoriana. Iza izy io ary oviana izy no lasa Mpanjaka?
MANENDRY MPANJAKA VAOVAO I JEHOVAH
15, 16. Oviana i Jesosy no voahosotra ho Mpanjaka, ary inona no efa nataony tetỳ an-tany mba hanomanana ny fitondrany?
15 Nanomboka nitory i Jaona Mpanao Batisa tamin’ny taona 29 hoe: “Efa manakaiky ny fanjakan’ny lanitra.” (Mat. 3:2) Nanendry an’i Jesosy ho Mesia i Jehovah tamin’i Jesosy nataon’i Jaona batisa, sady nanosotra azy ho Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra. Hita hoe tena tia an’i Jesosy ny Rainy, rehefa niteny hoe: “Io no Zanako malalako, izay sitrako.”—Mat. 3:17.
16 Nanome voninahitra ny Rainy foana i Jesosy, nandritra ny fanompoany. (Jaona 17:4) Nanao izany izy rehefa nitory momba ny Fanjakan’Andriamanitra. (Lioka 4:43) Nampianatra ny mpanara-dia azy mihitsy aza izy mba hangataka ny hahatongavan’io Fanjakana io. (Mat. 6:10) Izy no ho Mpanjakan’izy io, ka afaka nilaza tamin’ny mpanohitra azy izy hoe: “Eo afovoanareo ny fanjakan’Andriamanitra.” (Lioka 17:21) Nanao fifanekena tamin’ny mpianany momba ny fanjakana iray izy, ny alina talohan’ny hahafatesany. Nampanantena izy tamin’izay fa hisy mpianany tsy mivadika hiara-manjaka aminy ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.—Vakio ny Lioka 22:28-30.
17. Teo amin’iza ihany aloha i Jesosy no nanjaka tamin’ny taonjato voalohany, ary inona no tsy maintsy nandrasany?
17 Oviana i Jesosy no nanomboka nanjaka tao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra? Tsy afaka nanao izany avy hatrany izy. Novonoina izy ny ampitso tolakandro, ary niparitaka ny mpanara-dia azy. (Jaona 16:32) Mbola voafehin’i Jehovah anefa ny zava-nitranga, toy ny tamin’ny lasa ihany. Nanangana ny Zanany tamin’ny maty izy tamin’ny andro fahatelo. Nanomboka nanjaka tamin’ny voahosotra teo anivon’ny fiangonana kristianina i Jesosy, tamin’ny Pentekosta taona 33. (Kol. 1:13) Mbola tsy nomena fahefana feno mba hitondra ny tany anefa i Jesosy, ilay ‘taranaka’ nampanantenaina. Mbola nila niandry izy, araka ny tenin’i Jehovah taminy hoe: “Mipetraha eto ankavanako mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao.”—Sal. 110:1.
MANOMPOA AN’ILAY MPANJAKAN’NY MANDRAKIZAY
18, 19. Mandrisika antsika hanao inona ny fomba nampiharan’i Jehovah ny fahefany, ary inona no hianarantsika ao amin’ny lahatsoratra manaraka?
18 Nisy nanohitra foana ny zon’i Jehovah hitondra nandritra ny an’arivony taona, na tany an-danitra na teto an-tany. Tsy niala tsy ho Mpanjaka mihitsy anefa izy, ary voafehiny foana ny zava-nitranga. Ray be fitiavana izy, ka niaro sy nikarakara ny mpanompony tsy mivadika, toa an’i Noa sy Abrahama ary Davida. Mandrisika antsika izany mba hanaiky ny fahefan’ilay Mpanjakantsika sy hifandray akaiky kokoa aminy.
19 Mety hanontany anefa isika hoe: Nahoana no lazaina fa lasa Mpanjaka i Jehovah, amin’ny androntsika? Ahoana no hampisehoantsika fa tsy mivadika amin’ny Fanjakan’i Jehovah isika, ka ho lasa zanak’Andriamanitra lavorary sy ho anisan’ny fianakaviambeny? Inona no angatahantsika rehefa mivavaka isika hoe: “Ho tonga anie ny fanjakanao”? Hovaliana ao amin’ny lahatsoratra manaraka ireo.
Hizara Hizara Manompoa An’i Jehovah, Ilay Mpanjakan’ny Mandrakizay